Ukunqoba okungajwayelekile kwe-Ghana ngentando yeningi | Scrolla Izindaba
Ukunqoba okungajwayelekile kwe-Ghana ngentando yeningi
Kube unyaka omubi wentando yeningi. I-Belarus, i-Tanzania, kanye neMelika, lapho uDonald Trump neqembu le-Republican benza izinto ezixakayo ukuzama ukubuyisa imiphumela yokhetho, bonke banikeze ukhetho igama elibi.
Kuleli sonto i-Ghana ikhombisile ukuthi kwenziwa kanjani.
I-New Patriotic Party kaMengameli uNana Akufo Addo (engenhla) yakhethwa ukuthi ihlale emandleni ngamaphesenti angama-51.59 uma kuqhathaniswa ne-National Democratic Congress enamaphesenti angama-47.36.
Lokhu kucishe kufane nokuqhekeka phakathi kukaTrump noMengameli we-Democratic Alliance aphikisana naye uJoe Biden.
Ukhetho lwase-Ghana kusukela ngowezi-2000 lulandele iphethini yamathemu amabili eqembu ngalinye, futhi imvamisa ukhetho olulwa eduze – kwesinye isikhathi kube nenselelo yezomthetho.
UJohn Mahama we-NDC uphonsela inselelo imiphumela, nokuya enkantolo. “Futhi yingakho ngimi phambi kwenu kulobubusuku ngoba angizimisele ukwamukela imiphumela eqanjiwe yokhetho olunamaphutha,” kusho uMahama.
“Bafowethu nodadewethu, kubalulekile ukukhumbula ukuthi uhulumeni ophethe ulawula zonke izinsiza zombuso futhi ubheka zonke izikhungo zikahulumeni,” kusho uMahama etshela abalandeli bakhe.
Bayisihlanu abantu abashonile ebudloveni obabuzungeze ukhetho olwalusondelene, kodwa izingqapheli ezizimele zahalalisela i-Ghana ngezinhlolo ezazenziwe ngokuthula.
Uma ehlulwa enkantolo, ngokungafani noTrump, uMahama angalindelwa ukuthi amukele ukuhlulwa.